Yazisa uYihlo noNyoko
Isibalo Semibono 291 Izikhathi #Uthando
Kukhona imfihlo efihliwe ohlelweni lomndeni?
Njengoba nje kukhona ubaba, umama, nabantwana babo emndenini emhlabeni, kukhona Baba waseZulwini, uMama waseZulwini, nezingane Zabo zaseZulwini abazothola ifa lendlu kaNkulunkulu eMbusweni Wasezulwini.
Isipho esiyigugu esivela kuBazali baseZulwini ukuba izingane Zabo
Njengoba nje abazali emhlabeni bezinikela ezinganeni zabo, Abazali baseZulwini, futhi, bamthethelela abantwana Babo izono zabo ngomhlatshelo Wabo nothando lokuchitha igazi esiphambanweni, futhi Baye abathembisa insindiso.
Amalungu eBandla likaNkulunkulu ubhamba indlela yokholo ngokubonga ngenxa yomusa Wabazali baseZulwini, kulandela izwi likaBaba uKristu uAhnsahnghong ngenjabulo.
Futhi-ke sasinawobaba bethu benyama abasilayayo, sabazisa; pho, asiyikuthobela uYise wawomoya kakhulu kunalokho, siphile, na? KumaHebheru 12:9
UThando OLuhle Lobuzalwane